DRC: Jariidekedi wuxuu wajahayaa amni-darro la'aanta dalxiiskii hore ee dalka - TELES RELAY
ACCUEIL » International Xoogaga ayaa la kulmay Hydra amni daro markii ugu horeysay ee socdaalka dalka
Madaxwaynaha mudo sadex bilood ah, hogaamiyaha Congolese ee dalka Félix Tshisekedi wuxuu safarkiisii ​​ugu horeeyay ee gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo halkaas oo su'aalo laga waydiiyay mowduuc gaar ah oo ku takhasusay amniga.
Talaadadii hore, guushii doorashadii madaxweynenimo ee 30 December, waxay timid Beni (waqooyiga Kivu, bari), halkaas oo boqolaal rayid ah lagu xasuuqay tan iyo bishii Oktoobar 2014.
Xasuuqyadaas waxaa lagu sheegay in ay mas'uuliyiinta u dirayaan malleeyshiyaadka hubaysan ee ADF, taariikh ahaan Muslimiinta Uganda ah ee la dagaallama Madaxweynaha Madaxweyne Museveni iyo inay degeen bariga Congo tan iyo sannadkii 90.
Laakiin sarkaalka Congolese, General Muhindo Akili Mundos, ayaa lagu eedeeyay QM in ay kufsamayso koox hoosaad ah oo ka tirsan ADF markii uu joogay Beni ee 2014-15.
Dadka reer Beni waxay rajeynayaan in madaxwaynaha cusubi uu dib u soo celiyo awoodda dawladda iyo kalsoonida hay'adaha, isagoo jabinaya dhammaadka nidaamka Joseph Kabila.
Madaxweynaha Jamhuuriyaddu waa inuu xoojiyaa kormeerka "ciidanka, bilayska, hay'adda sirdoonka qaranka," ayuu yiri afhayeenka dadka deggan Beni, Janay Kasairyo.
Fikradaha amniga ayaa tilmaamey laba marxaladoodii hore ee madaxweynaha ee Goma iyo Lubumbashi.
"Nabadgelyadu wax waliba way fiicnaan doonaan, nabadgelyo ayay noqon doontaa lacag, nabadgelyo ayay jiri doontaa," ayuu AFPTV ku soo koobay askar gardaro ah, Manasse Mutabesha, markii uu yimid madaxweynaha Axaddii Goma.
Isniintii magaalada Goma, oo ah caasimadda Waqooyiga Kivu, ayaa madaxwaynaha muddo dhowr saacadood ah kulan la yeeshay golaha ammaanka ee saraakiisha sare (guddoomiye, bilayska, ciidanka, sirdoonka).
Gobolka Waqooyiga Kivu ayaa tan iyo sannadkii 25 ku xoogganaa Congolese ama kooxo hubaysan oo ajnabi ah, badanaa Rwanda FDLR Hutu.
Tan iyo bilawgii sanadka, dadka degan Goma ayaa sidoo kale ka welwelsanaa rabshad magaalo. "Dadka hubaysan waxay gashaan Goma waxayna dilaan muwaadiniin nabad ah iyaga oo aan walwal gelinin booliska ama ciidanka," ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Basile Olongo ayaa sheegay in daqiiqadaha kulanka.
Mudane Keisekedi ma dhahay erey ku saabsan ballan-qaadkiisii ​​ololihii uu sameeyay halkan horraantii Disembar: "Markii la doorto Madaxweyne, waxaan u magacaabi doonaa Shaqaalaha Guud ee Goma inay joojiyaan dhibaatada ka jirta amniga kooxaha hubaysan ".
Si kastaba ha ahaatee, intii lagu jiray kulanka, ayaa digniin laga soo saaray "siyaasiyiinta shady" oo xiriir la leh kooxo hubaysan, ayuu yiri wasiirku.
- Hantida saraakiisha -
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay "dib u soo kabashada muddada dheer" ee Waqooyiga Kivu.
Gudaha Lubumbashi todobaadkii hore, madaxweynuhu wuxuu "heley kicin la'aanta kormeerka ragga" ee ciidanka iyo bilayska.
Lubumbashi waa caasimad ka mid ah macdanta weyn ee laga qodo Katanga (koonfur), gobolka oo dukaamada ku yaal dukaamada inta badan hantida macdanta ee dalka.
Madaxweynuhu wuxuu go'aansaday in uu tirtiro askarta, bilayska iyo askarta ilaalada madaxweynaha ee shirkadaha macdanta.
Gudoomiye Ku Xigeenka, Gudoomiye-xigeenka Xisbiga ayaa sidoo kale go'aansaday "in la sii wado isbedelka rasmiga ah ee saraakiisha, sidii loo xakameyn lahaa safafka iyo kala-dambeynta ciidamada iyo booliska".
Tani waa booqashadii ugu horreysay ee dalxiis ee dalka ee Madaxweynaha dalka Kenya, kaas oo kor u kacay safaradii dibedda laga soo bilaabo markii uu furmay Janaayo 24.
Safarkiisii ​​u dambeeyay ee horaantii April wuxuu u geeyey Washington, halkaas oo Xoghayaha Gobolka Mike Pompeo uu balan qaaday inuu "taageerada barnaamijka isbedelka" ee DRC.
Tan iyo markii uu xilka ka qaaday, Mr. Keisekedi wali wali ma dhicin dawlad, waxuuna la shaqeeyaa wasiiradii hore ee madaxweyne Kabila, ama shaqaale ku meel gaar ah.
Waxa kale oo uu sii waday dib-u-habayn weyn oo ka dhex jira qalabka amniga, oo aan ahayn isbedelka madaxa Hay'adda Sirdoonka Qaranka (ANR).
Madaxweynuhu wuxuu ku xiran yahay heshiis siyaasadeed oo lala galo Kabila oo xakameynaya barlamaanka, golayaasha gobollada, aqlabiyadda guddoomiyayaasha gobollada iyo qalabka amniga.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/16/rdc-tshisekedi-face-lhydre-de-linscurit-pour-sa-premire-tourne-au-pays/
Notre-Dame de Paris: Boqor Ivorian ayaa doonaya inuu ka qaybqaato dib-u-dhiska